Technical Parameters: Five-mira Tandem Cold Rolling Mill
Tikaisa chigayo pekugara puranga Anonziwo rinopfungaira chigayo chawo, rinoshandiswa kuisa chinotenderera, chinotenderera kubereka, chinotenderera kugadziridzwa mudziyo, kutungamirira midziyo, etc. uye zvakare rinokosha mutoro-akatakura chezvinonhuwira ari rinopfungaira michina. Zvinonzi dzaiwanzogadzirwa zvavo simbi castings aro Kudzingwa kwacho rikasarudza kuti muviri pamusoro asina simba mukuru, ngura kuzvidzivirira uye vamwe unongotaura. Kuramba Impact mutoro kunoguma zvachose deformation pakati chokuita chakakodzera uye vanomhanyisa hukawanika ari rinopfungaira paguyo, Zvichakadai, zvinonzi mamwe waipa nokuda ngura mashoko, chinoguma kururama Positioning ari kushanda mupumburu uye negadziriro yeparutivi mupumburu uye kunyanya kufambira rwakapetwa vakatakura chock iri tikaisa paguyo chemwenje, zvichiita kuti zviome zvinobudirira kudzora Clearance pakati rinopfungaira chigayo redzimba pepuranga uye rugwaro kubereka chock.
Yatinoteerera pamusoro-panzvimbo kugadzira uye remanufacturing of tikaisa chigayo redzimba furemu uchishandisa Laser kuyera uye club midziyo, inokosha Mobile machine midziyo nokuti-nzvimbo kugadzira uye Mobile Laser cladding zvokushandisa, izvo zvine zvazvakanakira mukuru kugadzira zvakarurama, kusakara zvakanaka nemishonga uye ngura kuramba ari cladding layer rakaisvonaka flatness uye anotsvedzerera kukupedzisira ari kuonana pamusoro, saka, upenyu pabasa rinopfungaira chigayo redzimba puranga riri yekudyidzana akavandudzika, ari rinopfungaira nemazvo inosimbiswa uye chigadzirwa unhu harina akavandudzika.
High ndeiya yakaita Kururama after repair of the rolling mill housing frame
With kuitwa pamusoro-nzvimbo roughing pamusoro muchina chokushandisa, Laser cladding kubudikidza muchina mudziyo panzvimbo achifurira uye-nzvimbo Kupedzwa muchina mudziyo pashure Laser cladding, Unokanganisa tsika kugadzira nzira nokubvisa muchina mudziyo pashure zvokupfeka nzvimbo roughing, kugadzwa zviri achifurira nokuda Laser cladding, pachibviswa achifurira uye kuita Chinyorwa makorari pashure Laser cladding. Mushure kugadzira, ukuru kumugumo, ndeiya yakaita zvakarurama uye geometric kushivirira of tikaisa chigayo redzimba puranga achava 100% anodzorerwa chepakuvamba chakagadzirwa zvinodiwa.
kambani yedu akakudziridza unyanzvi hwakasiyana upfu kuti Maberere dzakakwirira Anti ngura, simba kusakara kuramba neukukutu. Anogadziriswa chinetso kufurirwa dzichifura uye kunodzivisa kuti Cracking ari nokuomesa rukoko nokuda yekudyidzana kuvandudzika pakati pokuoma gradient. Kuburikidza ré-kugadzira uye kugadzira, mashandiro midziyo inogona zvakanaka hwakavandudzika. The wegore abrasion kurasikirwa pemvura iri ≦ 0,05 mm / gore uye upenyu basa iri makore ≥10.
Full upenyu-kutenderera kurapa rinopfungaira chigayo redzimba furemu
We zvakagadzira zvizere upenyu-kutenderera utariri zano rinopfungaira chigayo redzimba puranga kusanganisira yekuedzwa, chirwere, nyanzvi chikwata kubvunzana, review, zvekushandisa zvinogadzirisa, Modelling uye simulation mashandiro, online Implementation, tevera-up chinzvimbo yokuzvigadzirisa. The chigadzirwa chichange pakugadzira mune yepamusoro uye yakakwirira-vakarongeka netsika pahwaro hwakadzama zvakarukwa basa kuronga.
Laser Remanufacturing pamusoro Drive mugodhi, akapindira Plate ...
Laser Remanufacturing pamusoro Drive mugodhi, akapindira Plate Uye Other Product Series
Laser chirungiso remanufacturing technology (Laser deposition mukugadzira LMD Michina) ndiko ndokuchiisa nhete rukoko nesimbi iri nechepasi zvinhu kuburikidza Laser kupisa kunobva. Rine zvakanakira yakaderera kupisa mazano substrate, duku kupisa kwechirwere, mukuru kutonhora zvazvingava, duku zviyo saizi, metallurgia chokuedza, mukuru Muitiro unobatanidza simba, etc.
Pakatanga Laser cladding zvibereko Taier
Pavakayambukira piro ndiro: iri akapindira pamutsago mudziyo nokuda inopisa kuramba rinopfungaira iri yakaiswa pamusoro yokumusoro chikamu shure-up mupumburu chock uye AGC humburumbira kuzadzisa mupumburu pakakoromoka kuparadzanisa kuchinja zviri tikaisa chigayo uye ndiro ukobvu kuzvidzora uye aripire kusiyana ari dhayamita dzakasiyana mabhanzi. We vava Laser cladding michina kuti dzikurukure akapindira pamutsago hwendefa pamusoro remanufacturing, nenzira iyi, iyo kusakara kuzvidzivirira uye ngura nemishonga vari yekudyidzana akavandudzika, uye upenyu yebasa kwakawedzera neinopfuura 5 nguva zvichienzaniswa kwakajairika richipedza.
Drive mugodhi: yacho nemotokari nomubato kuti simbi tikaisa dzaFord dzinowanzotsigi- rinoumbwa pakati unobva mugodhi, vadyi, flat musoro ruoko nezvimwe kuurongwa; pasi kushanda ezvinhu mukuru tembiricha, mukuru mwando yakakwirira simba, kufanana zvikamu zvinogona zvakakomba ngura vaneta uye sousingabatsiri. Tinobvumirana Laser cladding michina kuitisa Laser cladding remanufacturing yokugadzirisa kuurongwa yacho nemotokari mugodhi uye chisimbiso mishonga itsva, uye kudzikama uye basa upenyu zvigadzirwa vawedzerwe zvikuru.
Pictures of Laser remanufacturing zvinogadzirwa